FIARA VOTAFIKA AVY EO NIVADIKA : Olona roa no maty, dimy naratra, voaroba ny volan’ny mpandeha
Namoizana aina sy naharobana vola ny loza nitranga tamin’ny lalam-pirenena faharoa iny tsy lavitra an’i Manjakandriana. 12 janvier 2017
Zaza folo volana sy ramatoa iray no maty, dimy hafa naratra mafy. Io no vokatry ny fanafihana taksiborosy narahana lozam- pifamoivoizana, nitranga tao amin’ny Kaominina Maharidaza, Distrikan’i Manjakandriana, ny talata vao mangiran-dratsy lasa teo, tokony ho tamin’ny 3 ora maraina.
Araka ny fanazavana voaray avy any an-toerana dia fantatra fa avy any Moramanga hihazo an’Ambatolampy ity taksiborosy ity no nosakanan’ireo jiolahy vato be ny arabe. Nikoropaka ilay mpamily, ka nitady lalana niverenana, kanjo, mbola nampian’ireo jiolahy ny sakana tany aoriana, ka tsy afaka nihemotra ilay fiara.
Voatery nitady lalan-kafa ilay fiara, ka nivarina tany anaty tanimbary. Vokany, olona roa no maty, ka zaza folo volana ny iray, mpandeha dimy hafa naratra mafy. Tsy nijanona tamin’io tranga io ireo jiolahy, fa mbola norobain’izy ireo ny mpandeha rehetra izay nahatratra 18 no tao anatin’io taksiborosy io, ka vola an-tapitrisany sy finday ary firavaka volamena no lasan’ireo andian-jiolahy.
Nanararaom-paty araka ny fomba fiteny ireo jiolahy, nandritra io fandrobana io. Ity no fanafihana taksiborosy niseho voalohany tamin’ity taona ity, izay nahafatesana olona roa.
Ny zandary avy ao Manjakandriana no misahana ny famotorana sy ny fanadihadiana mikasika ity lozam-piarakodia narahana fanafihana ity.
RaJean sy TatianàR.